Madaxweyne Farmaajo oo faray Xukuumadda in ay kor u qaaddo tayada caafimaad ee Xarumaha Karantiilka - RajoQaran News Around The World
Home WARARKA Madaxweyne Farmaajo oo faray Xukuumadda in ay kor u qaaddo tayada caafimaad...
Madaxweyne Farmaajo oo faray Xukuumadda in ay kor u qaaddo tayada caafimaad ee Xarumaha Karantiilka
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo kaga qeyb galay dhanka Internetka kulanka Guddiga Qaran ee Xakameynta Cudurka COVID-19 ayaa ka xog-wareystay dadaallada lagu xakameynayo cudurkan, caqabadaha iyo baahida caafimaad ee ka jira dalka.
“Masuuliyad adag ayaa inaga saaran daryeelka muwaadiniinteenna uu soo rito cudurkan safmarka ah ee dunida aafeeyey. Muhiimadda ugu weyn waa in aan dadaal kasta gelinnaa ka hortagga cudurkan innaga oo xoojineyna tayada iyo adeegyadeenna caafimaad.”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa ugu baaqay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah in ay labo-laabaan dadaalkooda ku aaddan samatabixinta dalkeenna, isaga oo ku bogaadiyey Raiisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, laamaha caafimaadka dalka iyo Guddiga Qaran ee Xakameynta Cudurka COVID-19 dadaalka mugga weyn ee ay ku bixinayaan ilaalinta badqabka caafimaad ee shacabka Soomaaliyeed.
Ugu dambeyn Madaxweynaha ayaa ku ammaanay dadaallada bulshada rayidka iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay ka gaysanayaan kahortagga cudurka Coronavirus iyaga oo kaalin mug leh ka qaadanaya wacyigelinta iyo garab istaagga bahda caafimaadka dalka.
Previous articleCilmi baaris: Soonku wuxuu ka hortag u yahay kansarka, sokorta iyo cadaadiska-dhiigga!
Next articleSaldhigyada ciidamada Mareykanka ee Jabuuti oo la geliyey xaalad deg deg ah